Jonga uSkype kwaye Wongeza abafowunelwa Kwakho Windows 10 Laptop
ukuyeka njani ukuthatha i-tamsulosin ngokukhuselekileyo
I-Skype yindlela elungileyo yokuhlala unxibelelana nabanye Inkqubo ye-Skype iyafumaneka kweyakho Windows 10 ilaptop kwaye yenza ukuba ukwazi ukuthumela ii-IM kubahlobo kunye nokwenza iifowuni zezwi nevidiyo. I-Skype iyafumaneka njengokukhutshelwa simahla.
1Ukuqalisa usebenzisa i-Skype, cofa iqhosha lokuqala kwibar yomsebenzi, emva koko ucofe i-Skype tile. Kwifestile ebonakalayo cofa ukhuphele uSkype.
Ukukhuphela akufuneki kuthathe ixesha elide.
MbiniEmva kokukhuphela kunye nokufakela kugqityiwe, iwindow yeSkype ihlala ivulekile. Ungangena ngeakhawunti yakho yeMicrosoft okanye igama leSkype. Ukuba ubona ibhokisi yencoko yababini yoKhuseleko lweWindows, jonga kwakhona ukhetho olukhethiweyo, emva koko ucofe uQinisekiso lokuFikelela. (Unokucelwa ukuba ufake iphasiwedi yomlawuli.)
Emva koko, landela izikhokelo zokuseta isandi sakho, ividiyo, kunye nomfanekiso weprofayile.
Ngokuzenzekelayo, inkqubo yokufaka yongeza indlela emfutshane yedesktop onokuyisebenzisa ukuvula iSkye kwixesha elizayo. Unokusebenzisa ibhokisi yokukhangela yeCortana kwibar yomsebenzi ukukhangela kunye nokuvula i-Skype.
amayeza amiselweyo isicaphucaphu
3Emva kokugqiba ukunxibelelana nenkonzo, i-Skype emva koko ikwenza ukuba ukhangele abafowunelwa. (Kufuneka wongeze abahlobo bakho kunye nosapho njengabafowunelwa ukuze uthumele umyalezo kwaye ubafowunele. Kufuneka basetelwe njengabasebenzisi beSkype, nabo.) Unokucofa iqhosha leNcwadi yeDilesi yoKhangelo ukongeza abafowunelwa.
Abafowunelwa abakhoyo bavela kuluhlu lwabafowunelwa ngasekhohlo. Ichaphaza eliluhlaza ecaleni komfowunelwa kuthetha ukuba umntu okwangoku uyafumaneka kwincoko nakwiifowuni.
4Ukongeza umfowunelwa kamva, cofa kuKhangelo olungezantsi kwegama lomsebenzisi, chwetheza igama loqhakamshelwano lweSkype okanye idilesi ye-imeyile, emva koko ucofe iqhosha lokuKhangela kwi-Skype. Kuluhlu oluvelayo, cofa indawo ethi Yongeza iqhosha loQhakamshelwano.
Uza kubona iwindow ivela.
5Kwiwindow elandelayo, cofa indawo yokongeza kuQhakamshelwano.
Kuya kufuneka ubone umhlaba womyalezo.
6Hlela umyalezo omfutshane kwicandelo lomyalezo ovula kwaye ucofe u-Thumela. Nje ukuba umfowunelwa wakho afumane umyalezo wakho kwaye amkele isimemo, uphawu lombuzo kwifoto yomfowunelwa okanye kwi icon kuludwe lwakho loQhakamshelwano luyatshintsha lube luphawu lokujonga oluhlaza.
Uphawu lokujonga oluhlaza lukwabonisa xa umnxibelelwano ekwi-Intanethi, ke bobabini ninokuthumela umyalezo kunye nokufowuna kwi-Skype.
Inkcazo yepilisi jonga phezulu
Cofa u-Recent kwicala lasekhohlo le-Skype ukubonisa isicelo sakho soqhakamshelwano. Xa umfowunelwa esamkela, uyakubona nomyalezo wokuba umfowunelwa wabelane nawe ngeenkcukacha zakhe.
ukufumana ixabiso p
ufika njani kwikhibhodi yescreen
fluoxetine 20 mg amacwecwe
izinto zokutya emva kweetoni